Kỹ Thuật Trồng Bưởi "NĂNG SUẤT NHẤT" cho bà con | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Kỹ Thuật Trồng Bưởi “NĂNG SUẤT NHẤT” cho bà con | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
I-Grapefruit sisityalo esilula kakhulu ukukhula, kwaye ayifuni ukuba ube nayo Iindlela zokutyala iiGrapefruit phezulu kakhulu, nje ukuba uyikhathalele kakuhle, unokufumana isivuno esihle.
Ungabhekisa kwiindidi ezimbalwa zeepomelos ngoku ezikhule zithandwa kakhulu ngabantu abanje ngeDien pomelo, ipomelo yesikhumba esiluhlaza, iipomelo ezintlanu, iintsiba zengwamza, iPhuc Trach pomelo, njl.
Ukuza kwinqaku lanamhlanje, uFoo uya kukukhokela indlela yokulima grapefruit Kanye kunye neendlela zokunyamekela kunye nokutyala kweepomelos ukuphumeza isivuno esiphezulu.
1 Ukulungiselela phambi kokutyala ipomelo
2 Khetha iintlobo zeGrapefruit
3 Yeyiphi inyanga ekufuneka ndilime igrapefruit?
4 Ubuchule bokulungisa umhlaba wokukhulisa iipomelos
5 Eyona ndlela isebenzayo yokutyala i-pomelo
6 Ubuchwephesha bokukhulisa iipomelos kunye nenkqubo efanelekileyo “yokunyamekela”.
6.1 1, Ukunkcenkceshela
6.2 2, Ukuthena amasebe kunye nokudala i-canopy
6.3 3, Ukutyala imithi yokuthintela umoya
6.4 4, Ulawulo lwezinambuzane kwipomelo
7 Ukuvuselela iintyatyambo kunye neziqhamo kwiipomelos
8 Isichumisi sepomelo
8.1 1, Iindidi zezichumisi zepomelo
8.2 a, izichumisi Organic
8.3 b, izichumisi ezingaphiliyo
8.4 2, Chuba ngokwenqanaba ngalinye lokukhula kwesityalo
8.4.1 a, Unyaka wokuqala
8.4.2 b, Unyaka wesi-2 kunye nonyaka wesi-3
8.4.3 c, Ukususela emva konyaka wesi-3
9 Ukukhusela iziqhamo kunye nokuvuna ipomelo
9.1 1, Ingxowa yeziqhamo
9.2 2, Ukuvunwa
Ukulungiselela phambi kokutyala ipomelo
Ngaphambi kokuba uqale ukutyala i-grapefruit, kufuneka ulungiselele izixhobo eziyimfuneko kunye nezixhobo zokukhulisa i-grapefruit ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo.
I-Grapefruit ibonakala ngesikhumba esincinci, esiluhlaza. IGrapefruit inezondlo ezininzi, kulula ukuyitya kwaye iyathandwa ngabantu abaninzi.
Ngokuxhomekeke kuhlobo lwepomelo, umbala wegrapefruit uya kwahluka, kwiipomelos ezinolusu oluluhlaza, iipomelos zipinki, kuba ezinye iintlobo zepomelos zimhlophe, zinenani elilinganayo lamanzi kwi-citrus, kwaye zinencasa emnandi. .
Ipomelo nganye inobunzima obungapha kwe 2kg/isiqhamo, kwaye emva kokuvuna, ungayigcina iintsuku eziyi 15 ukuya kweziyi 20 ngaphandle kokutshintsha umgangatho we pomelo. Ukuze ube negadi echumileyo yepomelo evelisa iziqhamo unyaka wonke, kufuneka ube nenqanaba elilungileyo lokulungiselela.
Khetha iintlobo zeGrapefruit
I-Grapefruit inokohlulwa ibe ngamaqela amabini angundoqo: i-grapefruit ekhutshiweyo kunye ne-grapefruit exhunyelelwe. Kufuneka ukhethe i-grapefruit ekhutshiweyo kuba isicatshulwa se-grapefruit sinexesha elikhawulezayo lokuqhama. Iimpawu zikhula lula, kulula ukuzihoya kwaye neziqhamo ziveliswa kwinqanaba eliphantsi, umgangatho wesiqhamo uphezulu kunolo wepomelo ekhutshwayo.
Ngaloo nto, isicatshulwa se-grapefruit sinophawu olubalaseleyo lobomi obude. Xa ukhetha iintlobo zezityalo, kuyimfuneko ukukhetha izityalo eziphilileyo, amaqabunga endalo e-pomelo eluhlaza. Iingcambu zikhula kakuhle, kwaye akukho zimpawu zezinambuzane.
Kwaye kwakhona inqaku elincinci omele ukwenze kuphela isityalo i-grapefruit Kwindawo eyahlukileyo, akufanele idityaniswe kunye neminye imithi ye-citrus, efana ne-oranges, i-tangerines, njl.
Yeyiphi inyanga ekufuneka ndilime igrapefruit?
Elona xesha lilungileyo lokuqalisa Iindlela zokutyala iiGrapefruit ukuphela kwexesha lonyaka elomileyo kunye nokuqala kwexesha lemvula. Oko kukuthi ukususela ngoMatshi ukuya kuMeyi kwikhalenda yelanga. Emva kokutyala ipomelos okwethutyana, xa sele ineengcambu ezintsha, ziya kufumana iimvula ezipholileyo zokwenza umthi ube sempilweni.
Wonga ixesha elininzi lokunkcenkceshela kwaye izityalo nazo zineemeko ezilungele ukukhula. Uxinzelelo olufanelekileyo lokutyala lwepomelo yi-5m x 5m. Vumela isityalo sibe nendawo eyaneleyo yokukhula, sifumane ukukhanya kwelanga okwaneleyo kwaye sifunxe izondlo.
Ubuchule bokulungisa umhlaba wokukhulisa iipomelos
Kufuneka ukhethe iindawo zokutyala ezinomhlaba othe tyaba, umthamo omkhulu wokukhupha amanzi okukhulisa iipomelos. Umphezulu womhlaba kufuneka ube malunga ne-20 ukuya kwi-30cm ngaphezu komgangatho wamanzi ojikelezileyo. Ukuba akunjalo, kufuneka uvule imisele egadini ukwandisa umthamo wokukhupha amanzi kwizityalo xa kune imvula enkulu.
Emva kokukhetha indawo yokutyala i-pomelos, uqala ukumba imingxuma khulisa igrapefruit. Ungomba imingxuma engqukuva okanye isikwere, 1.2m x 1.2m ngobukhulu kwaye inobunzulu obumalunga ne-30cm. Kufuneka umbe umngxuma ubunzulu kangako.
Kuba ukuba umba kakhulu, uya kudibana nomhlaba we-alum. Olu hlobo lomhlaba alufanelekanga ukukhula kokuqala kwezityalo.
Inyathelo elilandelayo kukusasaza isixa se-2 ukuya kwi-3 kg ye-lime powder, kunye nesixa esiphakathi somgquba obolileyo.
Okulandelayo yi 30 ukuya kwi 40kg yesichumiso esiphilayo, udibanise nomhlaba emva koko ugcwalise umngxuma. Yiyeke ngolo hlobo inyanga, emva koko ungaqhubeka nokubeka umthi wepomelo.
Eyona ndlela isebenzayo yokutyala i-pomelo
Iindlela zokukhulisa iGrapefruit Akunzima kakhulu, kufuneka usebenzise ezi nkqubo zilandelayo fao, ungagqibezela ngokupheleleyo inyathelo lokukhula pomelo.
Emva kokuba ukhethe ukuthenga uhlobo olwanelisayo lwepomelo, susa ukugoqa kweplastiki ngaphandle kwendawo yokugcina abantwana. Yenza ngobumnene ukuphepha ukuchaphazela iingcambu.
Qhubeka nokugrumba umngxuma omkhudlwana kancinci kunembiza yenursery, embindini womngxuma olungiselelwe kwinyanga ephelileyo. Emva koko ubeke umthi wepomelo emngxunyeni, uwugcwalise ngomhlaba kwaye ucinezele ujikeleze isiseko ngonyawo lwakho de umthi uzinzile.
Ukuthintela umthi ukuba ungawi ngenxa yezaqhwithi, okanye izinto zangaphandle eziwuncothulayo umthi, kufuneka uncamathele isibonda esisisigxina kwaye ubophe umthi ngaphakathi.
Emva kokutyala i-pomelos, kufuneka unkcenkceshele umhlaba ojikeleze ingcambu. Emva koko sebenzisa iindiza, iindiza okanye idada ukugquma ukugcina ukufuma komhlaba.
Zonke iintsuku ezimbalwa uhlola ukufuma komhlaba kanye, ukuba umhlaba womile, kufuneka udibanise amanzi kumthi wepomelo ngokukhawuleza. Ngexesha lenyanga enye emva kokuphunyezwa kobuchule bokutyalwa kwepomelo, umhlaba ojikeleze isiseko somthi kufuneka ube nokufuma ukuze isityalo sikhule kakuhle.
Phawula: Musa ukunkcenkceshela kakhulu, okukhokelela kumanzi, ukubola kweengcambu.
Ubuchwephesha bokukhulisa iipomelos kunye nenkqubo efanelekileyo “yokunyamekela”.
Ukuze ufumane i-grapefruit etyebileyo, entle eluhlaza esemgangathweni, ukhathalelo lubaluleke kakhulu. Kuya kufuneka uzazi iindlela zokunkcenkceshela, ukuchumisa okanye ukuthena …
IiGrapefruits zidinga ukunkcenkceshelwa ngakumbi xa zikwinqanaba lezithole, nakwinqanaba lokudubula neziqhamo. Ngexesha elomileyo, linelanga kwaye lide, kufuneka uchithe amanzi rhoqo ukuze unike ukufuma kwesityalo.
Elona xesha lilungileyo lokunkcenkceshela kukusasa (xa ilanga lingatshisi kakhulu) nasemva kwemini. Ungasebenzisa umququ, okanye iingcambu zedada ukungena emthini ukunceda ukunciphisa umphunga wamanzi xa imozulu ishushu kakhulu.
Ngexesha lemvula, ukuphepha ukuchithwa kwamanzi, unokuvula imisele yamanzi. Yenza umoya wokuphefumla, kunqande ukuvumela isiphunzi sizaliswe ziintsuku ezininzi. Ibangela ukubola kweengcambu zomthi kunye nokuwa kwamagqabi.
2, Ukuthena amasebe kunye nokudala i-canopy
Qala ukuncothula iingcambu zezityalo xa zikhula zifikelele kubude obungama-50cm ukuya kwi-80cm, apho umthi ukhula ka-3 ukuya kwi-5 phezulu kwisiqu esingundoqo. Ushiya kuphela amasebe ama-3 aphilileyo, aphuma kwiindlela ezi-3 ezahlukeneyo, loo masebe ama-3 abizwa ngokuba ngamagatsha enqanaba 1. Sebenzisa izibonda ze-bamboo ukuplaga emhlabeni, emva koko usebenzise iintambo ukubopha i-3 level 1 amasebe ukwenza i-angle kunye nesebe eliphambili. 35 ukuya 40 degrees.
Emva kwexesha, loo masebe amanqanaba e-1 aya kuqhubeka ekhula kwinqanaba elilandelayo le-2 yamasebe. Shiya kuphela amasebe ama-2 ukuya ku-3 kwinqanaba lesi-2 ukwenzela ukhathalelo olulula, kunye namasebe omelele.
Amasebe eNqanaba lesi-2 afaneleka njengamasebe angama-20 ukuya kuma-30cm ukusuka kwisiqu esi-1 esingundoqo, umgama phakathi kwamasebe yi-20cm ukuya kwi-25cm.
Ukususela kwinqanaba le-2 amasebe aya kuqhubeka ekhula abe ngamasebe 3. Inani lenqanaba le-3 lamasebe alikhawulelwanga njengenqanaba lesi-2 kunye nenqanaba 1. Kufuneka kuphela ukususa amasebe ambalwa ukuba akhula kakhulu kunye. Yenza oku rhoqo, emva kweminyaka engaphezu kwe-2, umthi uya kwenza isethi epheleleyo ye-canopy elinganayo.
3, Ukutyala imithi yokuthintela umoya
Ukuba uyayenza Iindlela zokutyala iiGrapefruit Kwiindawo ezinommandla omkhulu, indawo yokutyala enomoya onamandla, kuyacetyiswa ukuba utyale imiqolo yemithi ukuthintela umoya. Ungasebenzisa izityalo ezifana ne-acacia mangium, okanye i-acacia acacia, i-cassia emnyama, njl.
Tyala ezi zityalo ubuncinci kumgama ozi-5m ukusuka kwigadi ye pomelo ukunqanda imeko yokuba zikhuphisana nomthi we pomelo ngezondlo. Injongo yokutyala loo mithi kukunciphisa umoya ngexesha leentyantyambo zemithi yepomelo, ukunceda lo mthi uphumeze izinga eliphezulu leziqhamo.
4, Ulawulo lwezinambuzane kwipomelo
Ngethuba lokuphunyezwa kweendlela zokutshala i-pomelo, kunzima ukuphepha imeko yezinambuzane kunye nezifo ezichaphazela umthi.
Umthi weGrapefruit ngumthi okhula ngokusempilweni kwaye awufane uphathwe zizinambuzane kunye nezifo. Nangona kunjalo, kusekho iintlobo zezinambuzane ezitshabalalisayo ezibonakala ngamanye amaxesha emithini, ezifana:
Iintshulube zitsala amakhubalo:Esi sisitshabalalisi esonakalisa izityalo xa iipomelos zisanda kutyalwa kwaye zincinci. Bakha amanxeba kumagqabi amancinci epomelo, amahlumela amancinci adala iimeko zokufikelela kwi-microorganisms. Amanyathelo okubulala nokuthintela: sebenzisa iPolytin 0.2% okanye i-slrespa 0.2%
I-Stem borer:Ukutshabalalisa esi sifo, ungasebenzisa iziyobisi: O fatox 0.1%, Symi sidin 0.2% ukutshiza ngokuthe ngqo kwisiqu somthi kunye ne-stem borers.
Isifo se-Anthracnose:Kufuneka undwendwele rhoqo kwaye ubeke iliso kwigadi, xa ufumanisa izityalo ezisuleleke nge-anthracnose zingasebenzisa iziyobisi: Daconil 75WP, Mancozeb 80WP, Antracol 70WP.
Ukunciphisa izinambuzane ekubunjweni komthi, kukulungele ukucoca rhoqo igadi yepomelo rhoqo ngenyanga. Kunye naloo nto kukucoca ingcambu nokususa onke amasebe awonakeleyo kunye nawosulelekileyo.
Ukuvuselela iintyatyambo kunye neziqhamo kwiipomelos
IGrapefruit sisityalo esinokuvelisa isiqhamo unyaka wonke. Ngoko ke, unokukhetha ixesha apho isiqhamo sithengisa kakuhle, imfuno yokusetyenziswa kwabantu iphezulu ukuphumeza isivuno.
Ukufumana isivuno esikhulu sezityalo, ungasebenzisa izivuseleli zeentyatyambo. Ixesha elifanelekileyo lokutshiza ukuvuselela iintyatyambo kunye neziqhamo malunga ne 7 ukuya kwi 8 inyanga phambi kwexesha lokuvunwa kwe grapefruit.
Nangona kunjalo, ukuba kwisigaba sokuvuna, ugcina isiqhamo emthini ixesha elide kakhulu, kuya kukhokelela ekungaphumeleli kwemithi, ngoko ke ukuba akukho mfuneko yokuyisebenzisa, kufuneka uqhubeke ukha phantsi ukuze ugcine umthi usempilweni. Ayichaphazelekanga.
Ukuze umthi uvelise isivuno esiphezulu kunye neziqhamo ezisemgangathweni, kunye nesiqhamo esiswiti kwinkqubo Iindlela zokutyala iiGrapefruit Ukuchumisa kufuneka kwenziwe ngexesha elifanelekileyo nangedosi efanelekileyo.
Kufuneka usebenzise zombini izichumisi eziphilayo kunye ne-inorganic ngaxeshanye kwaye usebenzise ingcambu kunye ne-foliar fertilization ukuphumeza ukusebenza kakuhle.
1, Iindidi zezichumisi zepomelo
Izichumisi zendalo zilungile kakhulu kwipomelos khulisa igrapefruit awukwazi ukuyihoya:
a, izichumisi Organic
Okwangoku, ngokubhekisele kwiimveliso ezicocekileyo, iimveliso ezikhuselekileyo, izichumisi ze-organic zithandwa kakhulu ngabantu ukuba basebenzise. Umlinganiselo ofanelekileyo womthi ngamnye ovuthiweyo ngonyaka usuka kuma-20 ukuya kuma-25 kg.
b, izichumisi ezingaphiliyo
Izichumisi zeDAP zihlala zisetyenziselwa ukusasazeka kude nesiseko, ngelixa izichumisi zeNPK zingasetyenziselwa ukutshiza ngokuthe ngqo emagqabini.
I-Nitrogen yinto ebangela ukuba imithi yepomelo ikhule ngokukhawuleza, idala amasebe amaninzi amatsha kunye namagqabi. Ngethuba lokukhula kwemithi ye-pomelo, umthi kufuneka uncediswe ngale nto. Ukuba kukho ukunqongophala kwenitrogen, isityalo siya kudodobala kwaye sicothe ukukhula.
I-Phosphorus: Inefuthe lokuvuselela inkqubo yeentyatyambo ezininzi kunye neseti yeziqhamo ezikhawulezayo. Ukongeza, i-phosphorus inceda izityalo ukuba zikhuseleke kwezinye izifo.
I-Potassium: Isetyenziselwa ukunceda imithi yepomelo yomelele, iintyatyambo kunye neziqhamo ezincinci aziwi.
2, Chuba ngokwenqanaba ngalinye lokukhula kwesityalo
Ngokuxhomekeke kunyaka wokukhula kwepomelo, indlela yokuchumisa nayo iyatshintsha, ukuze kuphunyezwe imveliso ephezulu ekukhuleni. khulisa igrapefruit Nceda ulandele iinkqubo eziyalelwa nguFao ngezantsi ukuba zisebenze kakhulu.
a, Unyaka wokuqala
Kwindlela yokukhulisa i-pomelo, ngenxa yokuba isixa sesichumiso kumngxuma wokuqala sisephezulu, kufuneka uchume kuphela nge-urea. Ngokomlinganiselo we-1kg yomgquba kwiilitha ezili-100 zamanzi. Khulisa ngokuqhubekayo kunyaka wokuqala ngamaxesha athile kanye ngenyanga.
b, Unyaka wesi-2 kunye nonyaka wesi-3
Kwiminyaka emibini ezayo, uchumisa malunga ne 40kg yomgquba + 250kg we superphosphate + 300kg ye urea ne 300kg ye potassium ngehektare nganye. Yahlula ube ziibhetshi ezi-4 ngokulinganayo:
Emva kwexesha lemvula, galela i-100% ye-phosphorus kunye nezichumisi eziphilayo
I-30% ye-potassium kunye nezichumisi ze-urea
Qhubeka usebenzisa i-30% yesixa se-potassium kunye nezichumisi ze-urea
Ngexesha lokugqibela ufaka isixa esiseleyo sesichumiso emva kwezi zicelo zingentla
c, Ukususela emva konyaka wesi-3
Ngeli xesha, umthi uvelisa iziqhamo rhoqo, ngoko ke umlinganiselo wesichumisi sokuchumisa umthi kufuneka wongezwe ngakumbi. Indlela yokuchumisa isafana nokuchumisa kwiminyaka yesi-2 neyesi-3.
Ukukhusela iziqhamo kunye nokuvuna ipomelo
Inkqubo yokudubula komthi wepomelo kunye neziqhamo zikwafuna izinto ezininzi ekufuneka ziqwalaselwe. Kufuneka ukhusele isiqhamo kakuhle ngeli xesha.
1, Ingxowa yeziqhamo
IGrapefruit xa ikhula idinga ukugquma kwangethuba ukugcina uzinzo. Xa i-pomelo inkulu njengeqanda ledada, kufuneka uqale ukwenza isikhwama.
Sebenzisa iingxowa zeplastiki ezimhlophe ukujonga lula, ngoko i-photosynthesis ayichaphazeleki. Isiqhamo siyakukhula ngokwesiqhelo, ngaphandle kokuhlaselwa zizinambuzane, okukhokelela ekwandeni kwesivuno kunye nomgangatho wesiqhamo xa kuthelekiswa neziqhamo ezingasongwanga.
Ngokuqinisekileyo eli linyathelo enikhangele phambili kulo nonke ngexesha lokuphunyezwa iindlela zokulima igrapefruit akunjalo? Emva kweminyaka emininzi yokuphumeza ubuchule bokukhula kwepomelos, ukunyamekela, imizamo kunye neendleko azincinci, de kube iziphumo zifunyenwe, yintoni evuyisayo.
Kufuneka uvune xa isiqhamo sivuthiwe, kuphephe ukuvuna kwangethuba xa isiqhamo singekavuthwa okanye sivuthwe kakhulu. Ngeli xesha, isiqhamo asiyi kufikelela kwinqanaba elitsha njengencasa owakhe wayonwabela.
Ngoko siye safunda malunga indlela yokulima grapefruit kunye neendlela zokutyala, indlela yokunyamekela ukufikelela esona sivuno sikhulu kunye nokusebenza kakuhle. Ngeli nqaku, i-Fao inethemba lokuba ungakhulisa eyakho imithi yepomelo eluhlaza, ukhule usempilweni kwaye ufumane isivuno esikhulu sepomelos. Umnqweno omhle!